I-X-ray ekhawulezileyo yeGeofumadas ngaphezulu kweenyanga ezingama-75-iGeofumadas
NgoJulayi, 2012 INDEX, egeomates My
Emva konyaka onesiqingatha sokuzimela phantsi kwesizinda seGeofumadas.com, sifikelele ngaphezulu kokutyelelwa kwe-70,000 ngenyanga. Kuninzi kakhulu kwaye kwabo balandela le ndawo ukusukela oko yaqalwa baya kubona ukuba ethubeni zizinto ezimbalwa kakhulu ezinokulungiswa okungathethekiyo, endaweni yoko ezinye izinto ziye zagcinwa. Ngokwam, emva kwamanqaku ayi-1,200 kufuneka ndivume ukuba ndifunde lukhulu. Kakhulu ngaphezulu kwabafundi abaza apha kwaye xa ndibona izibalo ndiziva ngathi zininzi izinto eziguqukileyo. Ngelixa iindwendwe zifumana iqhinga ababengazazi okanye impendulo kumbuzo wabo kuGoogle, ezinye zahlukile kwindlela yombhali, abanye abaneendawo zabo bafumana ukutyelelwa yiGeofumadas, eyona ilandelayo ilandelwa nge-rss okanye uthungelwano lwasentlalweni kunye nabanye bhalisa ukuyifumana ngeposi ngaphandle kokufikelela kwisiza. Oko kusetwa kuko kwenza ukuba umntu aqonde ukuba isebenza njani le nto kwaye yahluke njani kwinto endiyicingileyo kwiinyanga ezine zokuqala ukubuyela ku-2007. Ngamafutshane, ufunda ukuba neenqobo zokugweba, ukuphanda ngakumbi nokuhlonipha ezabanye; Omnye wamagcisa am kunye nabacebisi abathile sele bethethile apho babini abacinga ngokufanayo, omnye udlulile. Ukuhla kwenani lokupapashwa kuyaziwa, nangona kufanelekile ukuba izihloko ezimfutshane ngoku ziya kunxibelelwano lwasentlalweni, kodwa kukwakho neenkqubo endiyeke ukuthetha ngazo ngamandla afanayo kunye nexesha endinokulinikela ngalo ukubhala Ngaphantsi. Uluhlu lunenqaku kwinyanga nganye ukusukela ngoJuni 2007 xa iGeofumadas yaphuma ibulela inyathelo leCartesia, elihambelana nenkxalabo ebendinayo ukuba ndibhale malunga nemiba yezobuchwephesha enxulumene nendawo ye-geospatial. Ndiyaluthanda olu luhlu kuba ukongeza ekubeni kusekwe kwelona phepha liphezulu lezithuthi, kuphawula amanqaku kula mava. Izihloko ezisisigxina kolu khetho ziphawulwe ngemibala:
I-16 idityaniswa ne Umhlaba ka-Google, emele phantse ikota
I-16 inento yokwenza AutoCAD kunye nokusebenza kwayo nkqo. Akumangalisi oko ngenxa yokuma kwayo, nangona kubonakala ukuba u-2011 no-2009 zezona zihloko bezishukunyiswa kakhulu.Nangona bendithetha kakhulu Microstation Nge-AutoCAD, nje imixholo yokhetho ye5 yathandwa kakhulu.
Malunga IGPS, i-cadastre kunye nezicelo ezinxulumene nazo kukho amanqaku e-13
Kwaye kwizihloko eziqhelekileyo ze-8 zezihloko siqu. Ezinye ndiza kuzitshintsha -hayi ngasemva, ewe kwisandi-. Kodwa yayiyimbono yam ngalo mhla. Ukwehla kwezi zihloko kuyaqapheleka, uninzi lwazo lwabhalwa ngo-2008. Ayikuko ukuba ayisekho, kodwa ayikhange ithandwe ngamanye amanqaku aneyona traffic ininzi. Banokubonakala kudidi Ukuzonwabisa kunye nokuphefumlelwa.
Okubandakanyiweyo kwikholam nenani eliqikelelweyo lamanqaku ngenyanga, enomdla kakhulu kuba ikhangela indawo:
«Ayibhalwanga ngaphezulu, siya kuba nako abafundi abaninzi».
Ja nuwari 2013 I-Geofumed: ii-akhawunti ze-25 eziphambili ezilandelayo 4
Fe bruwari Umhlaba ka-Google I-7 ibeka umda ekubanjweni kwemifanekiso yeOrtho elungisiweyo 7
Matshi Jonga kwaye uguqule iifayile zodidi lweenguqulelo ezahlukeneyo ze AutoCAD 7
Epreli bentley I-ProjectWise, into yokuqala yokwazi 10
Meyi I-akhawunti ye-15 ye-Twitter ekufuneka ilandelwe ... kunyaka olandelayo 5
NgoJuni Incwadana yemigaqo yovavanyo i-cadastral edolophini 4
Julayi Imodeli ye cadastre edibeneyo: IWebinar 6
Agasti Thelekisa IGPS -Leica, Magellan, Trimble kunye neTopcon 6
Ja nuwari 2012 Ukuvalwa kweMegaupload kunye ezinye iimbonakalo 14
Fe bruwari Ukusuka kwi-Excel ukuya ku Umhlaba ka-Google ukusuka kulungelelwaniso lwe-UTM 7
Matshi Rhweba ngaphandle ilizwe luluhlu ku Umhlaba ka-Google, kwi-Excel, ngombhalo ocebileyo kunye nomfanekiso 12
Epreli I-akhawunti ye-Twitter ye-15 ukulandela 6
Meyi Hlala uphefumlelwe! Ileta eya kwam nziswano 7
NgoJuni Unyaka omkhulu weGoogle Chrome 8
Julayi Incwadi yokuHlola yokuKhuphela 12
Agasti IGPS y Umhlaba ka-Google ngokusebenzisana 8
NgoSeptemba Ikhosi yasimahla ye AutoCAD, Iyafumaneka ukuze ikhutshelwe 6
Oktobha Chaza, ukuchaneka kwesentimitha IGPS indleko ephantsi 9
NgoNovemba Yintoni iWindows kunye Ukuqhawula? 5
Disemba I-SuperGIS, umbono wokuqala 5
Ja nuwari 2011 Ungazi njani xa iGoogle ihlaziya imifanekiso indawo 11
Fe bruwari I-XYZtoCAD, umsebenzi uqhagamshelana nawo AutoCAD 9
Matshi Iindaba ezivela AutoCAD 2012, inxalenye yokuqala 15
Epreli Gaia GPS, ukubamba i-GPS, i-Ipad kunye neendlela zeselula 10
Meyi UTM kunye neendawo zendawo zidibanisa iimaphu zikagoogle 15
NgoJuni Georeferencing ifayile Cad 23
Julayi Izifundo zeeVidiyo AutoCAD, ikhululekile kwiintsuku ze-7 15
Agasti Vula iifayile eziliqela kml iimaphu zikagoogle 15
NgoSeptemba Yintoni entsha kwi-Global Mapper 13 15
Oktobha Google Curiosities Street View 15
NgoNovemba Yenza ulungelelaniso KwiCACC 19
Disemba Iindaba ze-5 ezivela AutoCAD 2013 20
Ja nuwari 2010 Shintsha umbala wangemuva: AutoCAD o Microstation 22
Fe bruwari Velisa imisele ne ArcGIS 14
Matshi IGPS IBhabheli, eyona ilungileyo yokusebenza idatha 13
Epreli Khuphela idatha kwi isitishi esipheleleyo 16
Meyi IGPS Isoftware Mapper 6, idatha yokubuyisela emva 12
NgoJuni MicrostationUbume bokushicilela 4
Julayi Iingxaki eziphambili ze-Acer Aspire One 7
Agasti Ukugqiba ngeMapServer 7
NgoSeptemba U-Alibre, eyona nto ibhetele yokuyila i-3D 7
Oktobha Isebenza njani iMephuServer 11
NgoNovemba Iingxaki ngomhleli wokubhaliweyo: Microstation V8 kwiVista nakwiWindows 7 19
Disemba AutoCAD I-WS, eyona nto ibhetele kwi-AutoDesk kwiwebhu 20
Ja nuwari 2009 ufunde AutoCAD I-3D yabasebenzi, izibonelelo ezixabisekileyo 31
Fe bruwari Oko kuzisa kwakhona AutoCAD 2010 31
Matshi Iza kuba njani itekhnoloji yakho kwi-50 iminyaka 37
Epreli Qhagamshela iManifold kunye neMephu yeSreet evulekileyo 25
Meyi 3D civil, uyilo lweendlela, isifundo 1 29
NgoJuni Bonisa umfanekiso we georeferenced Umhlaba ka-Google 23
Julayi Ubungakanani bokuqala be-GIS 29
Agasti Ukwahluke phakathi kwemifanekiso Umhlaba ka-Google Pro neGoogle Earth mahala 27
NgoSeptemba Ukukhuphela iimephu zezitalato Umhlaba ka-Google 14
Oktobha ver AutoCAD 2010 njenge-AutoCAD 2007 17
NgoNovemba 40 + izihlandlo zokudlala 16
Disemba Hlanganisa imephu kunye neetafile ze-Excel 18
Ja nuwari 2008 Iminyaka ye27 ye Microstation 40
Fe bruwari Imigaqo ye-7 yemodeli yelaylayer 40
Matshi Ibhuloho ehamba ngeendlela zeDNA 46
Epreli Umoya omoya, i Umhlaba ka-Google kwiNASA 49
Meyi Indlela yokubulala ulwandle 47
NgoJuni I-Geofumadas: ukusuka cadastre Multifunctional 24
Julayi Nam ndinayo ubomi 33
Agasti Ngenye imini kubomi beGeofumadas 13
NgoSeptemba Eli bali linye, ngoku ngeGPS 37
Oktobha I-Geofumadas, yam ubomi babucala 44
NgoNovemba I-IMS Ininzi, ukwenza enye into 29
Disemba I-Geofumadas, ehamba kunye iinwele zam ezingwevu 29
Juni 2007 ¿Ihlabathi lethu litshintshile ngayo Umhlaba ka-Google? 2
Julayi ¿Umhlaba ka-Google isetyenziswe ngu cadastre? 6
Agasti Omnye ibali yothando lweejomatics 2
NgoSeptemba Ichaneke kangakanani imifanekiso ye Umhlaba ka-Google 6
Oktobha Inkcazo engekelwe kwimifanekiso 10
NgoNovemba AutoCAD kunye ne-25 iminyaka 38
Disemba Ngaba unomdla nge imephu kuphela? 26
Kwifoto, izidalwa kuhambo lwakutshanje ngaphakathi.
Post edlulileyo«Ngaphambilini ZeNzululwazi nobuChwepheshe boLwazi lweJografi… kunye noLuntu lwabasebenzisi be-gvSIG eHonduras
Post Next Kwenzeka ntoni kwi-40?Okulandelayo »
Phendula kwi "X-ray ekhawulezileyo yeGeofumadas ngaphezulu kweenyanga ezingama-75"
Iinyanga ze-75 kule, ndiyathemba ukubona enye i-75 ngakumbi. Siyawathanda amanqaku akho